Sunflower (2006) | MM Movie Store
ကိုရီးယားကားတှကွေညျ့ရငျးခုတဈလောမှ သတိထားမိတဲ့အကွောငျးတှရှေိတယျ သူတို့ဇတျကားတျောတျောမြားမြားမှာ ပုစ်ဆာလေးတှေ မေးခှနျးလေးတှေ မွှုတျကှကျလေးတှနေဲ့တညျဆောကျထားတယျ
ဇတျအိမျကွီးကွီးမားမား မရှိရငျတောငျအထကျပါအကွောငျးအကွောငျးအရာမြားကွောငျ့ ဆှဲဆောငျမှုအရမျးကောငျးတယျ ကွညျ့ရှုသူပရိတျသတျကို စဉျးစားစရေငျး
ခံစားစရေငျး မြှျောလငျ့စရေငျးနဲ့ ဇတျသိမျးပိုငျးထိဆှဲချေါသှားတယျ….
ဒီကားကတော့ ဇတျအိမျလညျးကောငျး မငျးသားကလညျး ဟားဗတျဇတျလမျးတှဲနဲ့လူသိမြားတဲ့ မငျးသားကွီး Rae-won Kim ကအဓိကသရုပျဆောငျထားတယျရထားပျေါမှာ လူငယျတဈယောကျဟာ စာအုပျလေးဖတျရငျး ပါးစပျကရရှေတျနတေယျ
နောကျဘယျတော့မှရနျမဖွဈတော့ဘူးနောကျဘယျတော့မှ မသောကျတော့ဘူး နောကျဘယျတော့မှ မငိုတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားတှပေေါ့ သူပုံစံကွညျ့ရတာ ပီဘီကလေးငယျလေးနဲ့တူတယျ ခပျကုတျကုတျနဲ့အားလုံးကိုကွောကျရှံနတေဲ့ပုံ….တကယျတော့သူဟာ အတိတျတုနျးက တမွို့လုံးကွာကျရတဲ့လူမိုကျ…
လူသတျမှုဖွဈလို့ထောငျ ၁၀ နှဈကရြာကနေ လှတျရကျစလေို့ဇာတိမွို့ကိုပွနျလာခဲ့တယျ..သူဟာမိဘမဲ့သူဖွဈပမေဲ့ ဆကျပွီးမမိုကျခငျြတော့လို့ လူမိုကျဂိုဏျးအဖှဲ့တှဆေီသှားမနပေဲသူ့ကိုခဈြတဲ့မိသားစုတဈစုအိမျမှာသှားနခေဲ့တယျ
အဲ့ဒီအိမျလေးမှာစားသောကျဆိုငျလေးလညျးရှိတယျ အဲ့ဒီဆိုငျလေးရဲ့နာမညျက နကွောပနျးတဲ့…တကယျတော့ အဲ့ဒီဆိုငျဟာ အန်တရယျဆိုးကွီးကရြောကျနတေယျ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ လှတျတျောအမတျလုပျမဲ့သူတဈယောကျ က အဲ့ဒီဆိုငျကိုသိမျးယူဖကျြဆီးပွီး အဆောကျအဦးတဈခုဆောကျခငျြလို့ပါပဲ….
ကဲ လူလိမ်မာလေးတဈယောကျအတိတျတုနျးက ဘာလိုတှမေိုကျခဲ့လဲ သူ့ကိုမှေးစားခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့ရောဘယျလိုပတျမှုရှိလဲ အမတျလုပျမဲ့လူနဲ့အတူရှိတဲ့ ဂိုဏျးစတားအဖှဲ့တှကေိုရောဘယျလိုရငျဆိုငျမလဲဆိုတာတော့ ပရိတျသတျကွီးခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး
တဈခုတော့ကွိုပွောပါရစေ ကွညျ့ပွီးရငျတော့ ခငျဗြားမှာနှလုံးသားရှိသေးသားပဲဆိုတာ ကိုယျ့ကိုကိုယျအသိအမှတျပွုမိလိမျ့မယျ
ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ရင်းခုတစ်လောမှ သတိထားမိတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ် သူတို့ဇတ်ကားတော်တော်များများမှာ ပုစ္ဆာလေးတွေ မေးခွန်းလေးတွေ မြှုတ်ကွက်လေးတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်
ဇတ်အိမ်ကြီးကြီးမားမား မရှိရင်တောင်အထက်ပါအကြောင်းအကြောင်းအရာများကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းကောင်းတယ် ကြည့်ရှုသူပရိတ်သတ်ကို စဉ်းစားစေရင်း
ခံစားစေရင်း မျှော်လင့်စေရင်းနဲ့ ဇတ်သိမ်းပိုင်းထိဆွဲခေါ်သွားတယ်….
ဒီကားကတော့ ဇတ်အိမ်လည်းကောင်း မင်းသားကလည်း ဟားဗတ်ဇတ်လမ်းတွဲနဲ့လူသိများတဲ့ မင်းသားကြီး Rae-won Kim ကအဓိကသရုပ်ဆောင်ထားတယ်ရထားပေါ်မှာ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ စာအုပ်လေးဖတ်ရင်း ပါးစပ်ကရေရွတ်နေတယ်
နောက်ဘယ်တော့မှရန်မဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဘယ်တော့မှ မသောက်တော့ဘူး နောက်ဘယ်တော့မှ မငိုတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေပေါ့ သူပုံစံကြည့်ရတာ ပီဘီကလေးငယ်လေးနဲ့တူတယ် ခပ်ကုတ်ကုတ်နဲ့အားလုံးကိုကြောက်ရွံနေတဲ့ပုံ….တကယ်တော့သူဟာ အတိတ်တုန်းက တမြို့လုံးကြာက်ရတဲ့လူမိုက်…
လူသတ်မှုဖြစ်လို့ထောင် ၁၀ နှစ်ကျရာကနေ လွတ်ရက်စေ့လို့ဇာတိမြို့ကိုပြန်လာခဲ့တယ်..သူဟာမိဘမဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ ဆက်ပြီးမမိုက်ချင်တော့လို့ လူမိုက်ဂိုဏ်းအဖွဲ့တွေဆီသွားမနေပဲသူ့ကိုချစ်တဲ့မိသားစုတစ်စုအိမ်မှာသွားနေခဲ့တယ်
အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာစားသောက်ဆိုင်လေးလည်းရှိတယ် အဲ့ဒီဆိုင်လေးရဲ့နာမည်က နေကြာပန်းတဲ့…တကယ်တော့ အဲ့ဒီဆိုင်ဟာ အန္တရယ်ဆိုးကြီးကျရောက်နေတယ် အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ လွှတ်တော်အမတ်လုပ်မဲ့သူတစ်ယောက် က အဲ့ဒီဆိုင်ကိုသိမ်းယူဖျက်ဆီးပြီး အဆောက်အဦးတစ်ခုဆောက်ချင်လို့ပါပဲ….
ကဲ လူလိမ္မာလေးတစ်ယောက်အတိတ်တုန်းက ဘာလိုတွေမိုက်ခဲ့လဲ သူ့ကိုမွေးစားခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့ရောဘယ်လိုပတ်မှုရှိလဲ အမတ်လုပ်မဲ့လူနဲ့အတူရှိတဲ့ ဂိုဏ်းစတားအဖွဲ့တွေကိုရောဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
တစ်ခုတော့ကြိုပြောပါရစေ ကြည့်ပြီးရင်တော့ ခင်ဗျားမှာနှလုံးသားရှိသေးသားပဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အသိအမှတ်ပြုမိလိမ့်မယ်